Nhau - Chii chinonzi Furfural?
Chii Chinonzi Furfural?
Furfural kemikari inogadzirwa neakasikwa zvinhu izvo zvinowanzo gadzirirwa maindasitiri zvinangwa. Iyo inonyanya kugadzirwa neyekurima zvigadzirwa zvakadai seoat husks, bran, corncobs, uye sawdust. Zvimwe zvezvigadzirwa zvarinoshandisa zvinosanganisira kuuraya masora, fungicide, uye solvent. Icho zvakare chinhu chinozivikanwa mukugadzirwa kwemafuta ekufambisa uye mukugadzirisa mafuta ekuzora. Iyo kemikari chinhu chiri mukugadzirwa kwevamwe vanoverengeka maindasitiri vamiririri zvakare.
urfural ikemikari inogadzirwa neakasikwa zvinhu izvo zvinowanzo gadzirirwa maindasitiri zvinangwa.
Kana yagadzirwa-kuwanda, kemikari inogadzirwa nekuisa pentosan polysaccharides kuburikidza neyakaitwa acid hydrolysis, zvichireva kuti cellulose uye sitachi yezvinhu zvepasi zvinoshandurwa kuita shuga vachishandisa acid. Mumudziyo usingavharwe nemhepo, furfural ine viscous, isina ruvara, uye ine mafuta, uye ine hwema-hwemaamondi. Kujekesa kumhepo kunogona kupenda iyo mvura mumumvuri kubva yero kusvika ku brown.
Furfural ingango nyungudika mvura uye yakanyungudika zvachose mu ether uye ethanol. Pamusoro pekushandisa kwaro sekemikari iri yoga, inoshandiswa mukugadzira makemikari senge furan, furfuyl, nitrofurans, uye methylfuran. Aya makemikari anoshandiswa zvakare mukuwedzera kugadzira zvigadzirwa, zvinosanganisira zvekurima makemikari, mishonga, uye zvinodzikamisa.
Kune nzira dzinoverengeka idzo vanhu vanosangana nehunhu. Pamusoro pekuratidzira kumakemikari panguva yekugadziriswa, inogona kuwanikwa zvakasikwa mumhando dzinoverengeka dzechikafu. Kujekeswa kwechiedza kwechimiro ichi hakuna kuratidzwa kuti kunokuvadza.
Kuratidzirwa kwakanyanya kune furfural kunogona kuva chepfu. Mune bvunzo dzemarabhoritari pane vanhu nemhuka, furfural yakawanikwa ichitsamwisa ganda, mamota uye maziso. Izvo zvinonzi zvakare zvakakonzera kusagadzikana kwehuro uye nzira yekufema. Vamwe vakataura zvenguva pfupi mhedzisiro yekuratidzwa kumakemikari munzvimbo dzine mhepo isina mweya inosanganisira kutadza kufema, rurimi rune chiveve, uye kutadza kuravira. Anogona kuitika kwenguva yakareba mhedzisiro yerudzi urwu rwekuburitsa inogona kubva pamamiriro eganda akadai se eczema uye photosensitization kumatambudziko ekuona uye mapapu edema.
Furfural yakatanga kushandiswa zvakanyanya muna 1922 apo Quaker Oats Company yakatanga kuiburitsa neoat hulls. Oats inoenderera kuva imwe yenzira dzakakurumbira dzekugadzira kemikari. Izvo zvisati zvaitika, yaingoshandiswa chete mune mamwe marangi emafuta. Yakatanga kugadzirwa muna 1832 naJohann Wolfgang Döbereiner, wemakemikari wekuGerman uyo aishandisa zvitunha zvemasvosve kugadzira formic acid, iyo iyo furfural yaive yechigadzirwa. Masvosve anofungidzirwa kuti anga achishanda mukugadzira kemikari nekuti miviri yavo yaive nerudzi rwechinhu chemuti parizvino chinoshandiswa kugadzirisa.
Post nguva: Aug-13-2020
Shenxian Shuiyuan Nyowani Energy Technology Co, Ltd
Nhare: 0086 + 18963566079